BigCommerce na-ekwupụta ọkwa Ecommerce ọhụrụ na ThemeForest | ECommerce ozi ọma
Susana Maria Urbano Mateos | | StartUps na ndi oru itumgbere ahia, Nkuzi na akuru
BigCommerce, nke bu uzo ahia e-commerce na-eduga maka ịzụta na ire ihe okike, kwuputara na nso nso a Otu ahia-ahia na ThemeForest. Site na mmekọrịta a, ndị na-emepụta isiokwu ga-abawanye nnweta BigCommerce yana usoro nhazi ya ọgbara ọhụrụ.
BigCommerce, ụdị Ecommerce ọhụrụ na ThemeForest
Maka akụkụ ha, ndị na-ere ahịa ga-enwe ohere ọhụụ jiri uru Ecommerce Gburugburu inwe ahịa dị elu n'ịntanetị. ThemeForest ga-enye ndị na-ere ahịa ohere inweta ọtụtụ Gburugburu Gburugburu dị elu, nke a ga-ewu kpọmkwem maka ikpo okwu BigCommerce.
Nke a ga - eme ka ọ dịkwuo mfe ịmepụta mkpokọta ahaziri ahaziri maka azụmaahịa. A ga-enwekwa ọtụtụ ohere ndị ọzọ maka obodo ndị nrụpụta Envato Theme na-achọ imepụta ngwaahịa ọkachasị maka Nnukwu ikpo okwu BigCommerce.
Okwesiri ikwuputa na kemgbe ebidoro ya na 2006, obodo Envato eweputala ihe kariri $ 490 nde ere dijitalụ. ThemeForest Ọ bụkwa otu n'ime weebụsaịtị 300 gara na ụwa.
Na-enyefe BigCommerce Okwu mmepe, nweta nnukwu ndị na-ege ntị nke ndị na-azụ ahịa. Ya mere, site na saịtị a, ndị mmepe nwere ike iji usoro BigCommerce ọhụrụ mee ihe iji mepụta ụlọ ahịa pụrụ iche, isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ma sie ike maka BigCommerce.
Bigdị BigCommerce na ThemeForest Ọ ga-enwe nhọrọ nke Platform-kachasị kachasị Gburugburu, nke ọ bụla na-egosipụta njirimara ọrụ na mmeghachi omume, ihe ọgbara ọhụrụ, ụdị nhazi iji kwado ọtụtụ ngalaba kwụ ọtọ, yana nkwado maka obere, ọkara, na nnukwu katalọgụ.
Maka BigCommerce, nke a mmekorita ya na ThemeForest na-enye ha ohere ịnye ndị ahịa ohere dị mfe nke ịbanye na ikpo okwu e-commerce ha. Ọ na-enye obodo ThemeForest ohere iji usoro nhazi nke ngalaba ha n'ụzọ dị ka ha nwere ike isonye otu n'ime usoro okike na-eto ngwa ngwa na ecommerce.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » BigCommerce na-ekwupụta ọkwa Ecommerce ọhụrụ na ThemeForest